ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ မျက်စိအန္တရာယ် – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
January 11, 2018 USDP 2016
အိန္ဒိယမှာ glaucoma ရေတိမ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာ မြင့်တက် လျက်ရှိပြီး မျက်စိကုသမားတော်တွေ ကတော့ ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိကတရားခံက ဆေးလိပ်သောက် တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သတိပေးခဲ့ ပါတယ်။ ရေတိမ်ရောဂါ သာမက အသက်အရွယ်ကြောင့် မျက်စိအာရုံခံလွှာ ကွာကျပျက်စီး ခြင်း Age related macula degeneration (AMD) နဲ့ အခြား မျက်စိရောဂါေ တွပါ ဖြစ်ပွားစေနိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူဦးရေရဲ့ ၁၀-၂၀% လောက်ကသာ ယင်း အန္တရာယ်ကို သတိထားမိကြပါတယ်။
မျက်စိနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတော် တော်များများဟာ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဆေးလိပ် သောက်တာကြောင့် ရေတိမ်၊ AMD အတွင်းတိမ်၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ကြောင့် မျက်စိပျက်စီးမှု (Diabetic Refinopathy)၊ မျက်စိခြောက် ရောဂါစု စတာတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ် သက်နေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မသောက်တာ တောင်မှ တဆင့်ခံရှူ ရှိုက်နေရသူတွေ အနေနဲ့လည်း AMD ဖြစ်နိုင်ဖို့ အခြေအနေပိုများ ပါတယ်။ ရေတိမ် ရောဂါကတော့ မျက်စိအာရုံကြောကို ပျက်စီးစေတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပြီး၊ AMD ကတော့ အမြင်အာရုံခံလွှာရဲ့ အလယ် ဗဟိုကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
ခြောက်သွေ့ မျက်စိအာရုံခံလွှာ ပျက်စီးတဲ့ရောဂါ မှာတော့ မျက်ကြည်လွှာရဲ့ အလယ် ဗဟို ပျက်စီးတာဖြစ်ပြီး၊ စိုစွတ် မျက်စိအာရုံခံလွှာ ပျက်စီးတဲ့ရောဂါ မှာတော့ မျက်ကြည်လွှာအောက်ခြေ က သွေးကြောတွေ ပျက်စီးလာတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ AMD မှာ အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးပုံက အလယ်ဗဟိုမြင်ကွင်းတွေ ပြတ်သားမှု မရှိပဲေ၀၀ါးလာပြီး၊ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုဆိုးလာစေပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးမှုက အခြားမျက်စိရောဂါတွေလိုပဲ ဘာလက္ခဏာမှမပြပဲ၊ သူငယ်အိမ်ကို ချဲ့ပြီး စစ်ဆေးမှုလုပ်မှသာ အမြင် အာရုံမထိခိုက်မီ တွေ့ရှိနိုင်တာပါ။
တစ်နေ့ကို ဆေးလိပ် ၁၀ လိပ်ထက်မနည်း သောက်သူတွေကို အလွန် အကျွံသောက်သူတွေလို့ သတ်မှတ် ထားပြီး ထိုသူတွေက ဆေးလိပ်မသောက်သူတွေထက် အတွင်းတိမ်ဖြစ် နိုင်ခြေ ၃ ဆပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုကြားမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ မျက်စိအန္တရာယ် ဆက်စပ်ပုံ သတိထားဖို့ လိုနေပါပြီလို့ အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက အဆုတ် သာမကပဲ မျက်စိပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဆေးလိပ်ကြောင့် မျက်စိထိခိုက်မှုကို လျော့ကျစေတဲ့ အာဟာရတွေကတော့ အိုမီဂါဒ ဖက်တီး အက်ဆစ်၊ ဇင့်နဲ့ ဗီတာမင် စီ၊ အီး တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Health Updates Journal
ကြိုးမဲ့နားကြပ်တွေရဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်းကို သုံးဆမြှင့်တင်နိုင်မယ့် QUALCOMM ချစ်ပ်အသစ် →
အရိုးသန်မာစေရန် စားသင့်သော အကောင်းဆုံးအသီး
March 16, 2017 USDP 2016 Comments Off on အရိုးသန်မာစေရန် စားသင့်သော အကောင်းဆုံးအသီး
ကြေးနီခွက်ဖြင့် ရေသောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ..!
March 8, 2017 USDP 2016 Comments Off on ကြေးနီခွက်ဖြင့် ရေသောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ..!
ရာသီဥတုပူလာတဲ့အခါ ဒီလို အစားအစာတွေ မစားသင့်တော့
May 3, 2017 USDP 2016 Comments Off on ရာသီဥတုပူလာတဲ့အခါ ဒီလို အစားအစာတွေ မစားသင့်တော့